Mesosphere: iyo inoshanda sisitimu yedata nzvimbo | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi unoziva Apache Mesos, chirongwa cheAPache Foundation icho chiri chiitiko chakavhurwa chakatangwa paUniversity yeCalifornia (Berkeley) yekambani manejimendi manejimendi inopa kusarudzika kwezviwanikwa uye kugonesa kuchinjisa kuburikidza nekushambadzira mafomu kana masisitimu ekuvandudza mashandisirwo emasumbu ekugadzirisa muDataCenters hombe.
Zvakanaka, kutanga kunonzi Mesosphere yakagadzira anoshanda sisitimu inoenderana zvakanyanya neApache Mesos pakati pemamwe mapurojekiti, kutonga aya madacacenters. Iyo inoshanda sisitimu inotorawo zita rayo kubva kune vezvemabhizimusi kambani Mesosphere, uko boka revanyanzvi rinoshanda nesimba kuti riuye nechigadzirwa chakanakira nzvimbo dzemabasa dzinonetsa. Mabhenefiti ayo akatungamira kuti igamuchire anodarika mamirioni makumi matatu nemazana emadhora emadhora ekuwana mari nekuvandudza.
Chaizvoizvo hazvina kunaka kuidana kuti inoshanda senzira yakadaro, sezvo ivo pachavo vachizviti DCOS, ndiko kuti, DataCenter Inoshanda Sisitimu, sezvo isiri yekushandisa generic senge mamwe masisitimu anoshanda kana kugoverwa. Musiyano mukuru ndewokuti haudi kuvhara sevha imwe chete, asi kuunza pamwechete eseva munzvimbo yekugadzirisa dhata, iyo inogona kupa zvakanakira zvinoonekwa mugore rine mukurumbira.
Chaizvoizvo, Mesosphere inobvumira maneja mhanya kunyorera pamazana kana zviuru zvemaseva sekunge ingori sevha imwe chete, inofambisa iyo nzira yese uye ichipa akasiyana mabhenefiti. Kukosha kwayo kwakakura zvekuti nyanzvi zhinji dzinosimbisa kuti Mesosphere ndeimwe yemapurojekiti akakosha munguva dzichangopfuura, ichibvumira masumbu kutarisirwa mune imwe nguva yemaawa kana maminetsi, ichienderana neanoshanda masystem akadai seRed Hat Linux, Ubuntu, CentOS, CoreOS, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mesosphere: iyo inoshanda sisitimu yedata nzvimbo
R satch akadaro
Ini ndinoda aya marudzi ezvinyorwa, asi ini ndaona kuti mune mazhinji acho haabatanidze zvinongedzo zvekutarisa zvirimo zvavari kutaura nezvazvo, izano rinogona kuvandudzwa
Pindura kuR satch
pfungwa yakanaka kwazvo, zvingave zvakanaka kuratidza masosi
Pindura kuna alan m